म पायल्स र फिसरको क्रोनिक रोगी । उमेर ४३ बर्षको पुरूष । हाल दिशा निकै टाइट हुन्छ । अायुर्वेदिक त्रिफला सेवन गरेर दिशा लुज गरेको छु । पछिल्लो समय, जिब्रो निकै कालो हुदै गएको छ । ल्याब रिपोर्टमा प्लेटेलेटस् १३५००० देखाएको छ, मोनोसाइट शुन्य छ । भिडियो एक्सरे तथा अन्य ल्याबका रिपोर्ट सामान्य छन् । मेरो के समस्या होला र समाधान केही छ कि?
Asked by म पायल्स र फिसरको क्रोनिक रोगी । उमेर ४३ बर्षको पुरूष । हाल दिशा निकै टाइट हुन्छ । अायुर्वेदिक त्रिफला सेवन गरेर दिशा लुज गरेको छु । पछिल्लो समय, जिब्रो निकै कालो हुदै गएको छ । ल्याब रिपोर्टमा प्लेटेलेटस् १३५००० देखाएको छ, मोनोसाइट शुन्य छ । भिडियो एक्सरे तथा अन्य ल्याबका रिपोर्ट सामान्य छन् । मेरो के समस्या होला र समाधान केही छ कि?
221 views 1 Answers0Likes General Surgery
पानी र झोल कुराहरु प्रशस्त खानुहोला। Platelet केही समयपछि फेरि दोहोराएर हेर्न सकिन्छ । Monocyte शून्य देखाएर केही फरक पर्दैन।